IT Nkwado Software | Sistemụ tiketi nkwado IT | Motadata
DFITTM n'elu ikpo okwu
Usoro nwe nke na-agụnye AI na ML maka ọrụ IT iji mee ka arụmọrụ dị elu ma belata ọnụ ahịa ọrụ.
Nleba anya netwọkụNgwa nleba anya n'ezie yana ngwa njikọ AI na-akwalite maka nyocha netwọkụ nke otu ọgbakọ niile.
Nlekota oru akụrụngwaNgwọta nleba anya n'etiti etiti dị elu iji mee akụrụngwa IT ọgbara ọhụrụ.
Nchịkọta ndekọNyochaa data igwe ka ịchọta usoro na usoro iji nweta nghọta
Automation netwọkụMepụta Runbooks iji chekwaa oge na mbọ.
Oche ỌrụMegharịa nnyefe ọrụ IT site na iji akpaaka nke AI kwadoro
Onye njikwa akụEchefula ndekọ akụrụngwa IT na ndị na-abụghị IT gị
Patch ManagerMechie njikwa mmachi ma chebe njedebe gị pụọ na adịghị ike
Rịọ arịrịọ ngosi
Mee ka nnyefe ọrụ gị dị ngwa ma kwalite usoro ime ime iji zute atụmanya na-arị elu nke ndị ọrụ njedebe gị.
Nlekota igwe ojii
Ngwakọ IT nlekota oru
Uru 4 nke ijikọ tebụl ọrụ yana sistemụ njikwa njedebe
BlọọgụMụta ihe dị ọhụrụ na ngalaba ITOps.
ebookGụọ akwụkwọ anyị kacha ọhụrụ.
Mbipụta ndị nchụ nta akụkọNweta mmelite ụlọ ọrụ kachasị ọhụrụ.
Broshuọ NgwaahịaBudata broshuọ ọhụrụ anyị ka ịmata ngwaahịa anyị nke ọma.
Ịga nke Ọma AkụkọGụọ otú ndị ahịa anyị si rite uru na ngwọta anyị.
NewsMkpuchi akụkọ ọhụrụ anyị.
Chọta Onye Mmekọ
Aghọ a Usoronsìème
Mmemme Onye Mmekọ
Ịbụ onye mmekọ?
Onye Mmekọ Banye
Rịọ ịnweta Portal
Onyinye na Recoghọta
Motadata na GeM
Rịọ a ngosi
Ọrụ Nkwado IT
Ibufe ọrụ IT zuru oke yana oche ọrụ AI
Motadata ServiceOps nwere ike inyere nzukọ gị aka imeri iju mmiri nke tiketi wee wuo gburugburu ebe obibi siri ike iji nye nkwado IT zuru oke.
Jiri dozie ihe omume ngwa ngwa Igwefoto ọgụgụ isi
Motadata ServiceOps bụ ngwa ITSM na-akwado AI nke na-enye akpaaka dị ka ntinye aka nke tiketi, akpaaka na-arụ ọrụ, ọkwa, nkwalite akpaaka, wdg. Ijikwa idei mmiri nke tiketi.
Nyefee onye ọrụ mebere ka ọ dozie nsogbu ndị ama ama, na-enye ndị ọrụ ọrụ IT ohere ijikwa oge ha nke ọma.
Oche ọrụ akpaaka
Megharịa usoro njikwa okirikiri ndụ tiketi ọ bụla site na iji ịdọrọ na dobe ihe nrụpụta ọrụ.
Mepụta njikọ ezi uche dị n'etiti data na ndabere ngwa maapụ n'ime dashboard jikọtara ọnụ iji mee mkpebi ngwa ngwa na ama ama.
Mepụta oche ọrụ ọgụgụ isi
Jikwaa usoro ndụ nke arịrịọ ad-hoc na akpaaka nwere ọgụgụ isi dị ka ọrụ akpaaka nke na-atụle oke ọrụ nka na nka ha.
Soro ọtụtụ ndị ọkachamara na-arụkọ ọrụ na otu tiketi maka mkpebi ngwa ngwa.
Nweta tiketi na-akpaghị aka ka mmebi SLA gachara dabere na iwu akpaaka akọwapụtara nke ọma iji kwado ihe ndị ga-ebute ụzọ tiketi.
Njikwa okirikiri ndụ tiketi zuru oke
Mee RCA site na tiketi site na iji njikwa nsogbu.
Jikwaa mgbanwe ndị achọrọ iji dozie tiketi site na iji modul njikwa mgbanwe.
Nweta data nhazi nke akụ metụtara tiketi iji wuo ọnọdụ ka mma.
Jiri ikike nke ọrụ onwe
Mepụta ebe nchekwa ntọala ihe ọmụma iji dozie nsogbu ndị ama ama ngwa ngwa yana ịchekwa oge na mbọ ndị ọrụ nka.
Otu ọrụ IT dabere na ngalaba na-eji ohere otu iji jikwaa onye na-enweta ihe.
Mepụta usoro nkata maka onye ọrụ mebere ka ọ dozie otu okwu wee mee ka ọ dị site na ọnụ ụzọ ọrụ.
Mepụta ọnụ na nghọta Chain Ngwá Ọrụ DevOps
Portal zuru oke
Nyefee ọnụ ụzọ dị mfe iji ma mee ka ndị ọrụ njedebe nwee ike ibuli arịrịọ oge ọ bụla site na ebe ọ bụla.
Jikwaa ihe ndị mbụ
Tụgharịa uche nke ndị ọrụ nka na mmemme dị oke mkpa site na imezi nzaghachi maka okwu ndị ama ama.
Enweghị koodu arụ ọrụ
Mepụta n ọnụ ọgụgụ nke workflows ka akpaaka routing ọrụ aga-eme na-edeghị otu ahịrị nke koodu.
Nchọpụta nsogbu Na-aga
Kwado ndị ọrụ nka ka ha rụọ ọrụ na nweta tiketi site na ngwa mkpanaka.
Mfe mkpesa na metrik
Gbakọọ ma soro metrics dị mkpa dị ka MTTR, MTTA, MTBF, wdg site na iji akụkọ omenala.
Tọọ SLA nke tiketi dabere na mkpa ma kọwaa njirisi abawanye maka igbochi ụdị mmebi ọ bụla.
Otu ebe azịza gị ITOps ihe ịma aka
Nweta nnwale ụbọchị 30 n'efu maka azịza anyị
Bido njem na-enweghị nsogbu iji jikwaa akụrụngwa IT gị
Malite nnwale efu
Onye njikwa akụ
Nlekota oru akụrụngwa
Nleba anya netwọkụ
Webserver nlekota oru
Ihe omuma banyere ihe omuma
AI na-akparịta ụka
Ịga nke Ọma Akụkọ
Mbipụta ndị nchụ nta akụkọ
Jiri otu ikpo okwu ejikọtara ọnụ malite ijikwa akụrụngwa IT gị.
Bido ọnwụnwa efu
NUM 2022 Mindarray Systems Pvt. Ltd., Ikike niile echekwabara.
Tinye akwụkwọ edemede/CV
Anyị na-eji kuki na weebụsaịtị anyị iji nye gị ahụmịhe kachasị mkpa site na icheta mmasị gị na nleta ugboro ugboro. Site na ịpị “Nabata niile”, ị kwenye iji kuki niile. Agbanyeghị, ị nwere ike ịga "Ntọala kuki" iji nye nkwenye achịkwa.
Ntọala KukiNabata Ha Niile
Kuki ndị dị mkpa dị ezigbo mkpa maka weebụsaịtị webụsaịtị ọfụma. Kuki ndị a na-ahụ maka arụmọrụ na atụmatụ nchekwa nke weebụsaịtị, na-enweghị aha.
cookielawinfo-nyocha igbe 11 ọnwa Kuki a bụ setịpụrụ GDPR Cookie Consent ngwa mgbakwunye. A na-eji kuki ahụ iji chekwaa nkwenye ndị ọrụ maka kuki ndị ọzọ na "Nchịkọta".
cookielawinfo-checkbox-arụ ọrụ 11 ọnwa Kuki ahụ bụ ntọala nkwenye kuki nke GDPR ka ịdekọ nkwenye onye ọrụ maka kuki ndị ọzọ na-arụ ọrụ ''.
cookielawinfo-checkbox-Mkpa 11 ọnwa Kuki a bụ setịpụrụ GDPR Cookie Consent ngwa mgbakwunye. A na-eji kuki ndị ahụ iji chekwaa nkwenye ndị ọrụ maka kuki ndị ahụ na ngalaba "Dị mkpa".
cookielawinfo-igbe ndị ọzọ 11 ọnwa Kuki a bụ setịpụrụ GDPR Cookie Consent ngwa mgbakwunye. A na-eji kuki ahụ iji chekwaa nkwenye ndị ọrụ maka kuki ndị ọzọ na ụdị "Ndị ọzọ.
cookielawinfo-checkbox-arụmọrụ 11 ọnwa Kuki a bụ setịpụrụ GDPR Cookie Consent ngwa mgbakwunye. A na-eji kuki ahụ iji chekwaa nkwenye ndị ọrụ maka kuki ndị ọzọ na "Ọrụ".
nlele_cookie_policy 11 ọnwa Kuki setịpụrụ GDPR Kuki Nkwenye Kuki ma jiri ya iji chekwaa ma onye ọrụ ekwenyela na kuki. Ọ naghị edebe data onwe onye ọ bụla.
Kuki ndị na-arụ ọrụ na-enyere aka ịrụ ọrụ ụfọdụ dịka ịkekọrịta ọdịnaya nke weebụsaịtị na ntanetị mgbasa ozi, na-anakọta nzaghachi, na atụmatụ ndị ọzọ nke atọ.
A na-eji kuki arụmọrụ iji ghọta ma nyochaa isi arụmọrụ arụmọrụ nke weebụsaịtị nke na-enyere aka n'ịkwalite ahụmịhe ọrụ ndị ka mma maka ndị ọbịa.
A na-eji kuki nyocha iji ghọta otú ndị ọbịa si emekọrịta na weebụsaịtị. Kuki ndị a na-enyere aka inye ozi gbasara ọnụọgụ ọnụọgụ ndị ọbịa, ọnụego bounce, isi mmalite okporo ụzọ, wdg.
A na-eji kuki mgbasa ozi iji nye ndị ọbịa mgbasa ozi na mgbasa ozi dị mkpa. Kuki ndị a na-eso ndị ọbịa gafee weebụsaịtị ma nakọta ozi iji nye mgbasa ozi ahaziri iche.
Kuki ndị ọzọ na-enweghị ngalaba bụ ndị a na-enyocha ma anaghị ekewa ha n'ime otu.